Iindaba zesiXhosa, 19 eyoMdumba 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, 19 eyoMdumba 2019
Written by Ashia Nkontsa on 19/02/2019
Ifake ibheyile indoda ekurhanelwa uba ibulele uTishala eDa Gamaskop
Izakuvela enkundleni kamantyi yaseSwellendam namhlanje apho kulindeleke ifake isicelo sebheyile indoda eyanyaniswa nentlaninge yamatyala okubulala angekasonjululswa. Ebutsheni bale nyanga amapolisa afumene umkhomba-ndlela kwityala lango2017 lokubulawa kukatitshala eDa Gamaskop eMazantsi eKapa. Amapolisa amzingele umrhanelwa ngokuthelekisa incindi yofuzo aza amnqakula ebutsheni bale nyanga. Kulandela uphando oluqhubayo abecuphi bayajonga ukuba angayanyaniswa kusini na nezinye iziganeko zokubulala ezine ezenzeke eWolseley, eWorcester,eSwellendam naseDe Doorns phakathi kuka2016 no2017.
Kulindeleke uqhankqalazo lokulwela intswelo ngqesho kweliPhondo
Umfelandawonye weemanyano zabasebenzi belizwe loMzantsi Afrika, kweli phondo leNtshona Koloni iCOSATU ithi namhlanje ikulungele ukuqhankqalazela intswelangqesho kweliphondo. Oluqhankqalazo luzakanye kusuku phambi kwentetho yohlahlolwabiwo mali yomphathiswa wezimali kweli umnumzana Tito Mboweni. Ukanti imibutho yabasebenzi eliqela efana nombutho wootitshala iSADTU,owamapolisa iPOPCRU neyabasebenzi bomqhaphu iSACTAWU kulindeleke ukuba ibeyinxalenye yoluqhankqalazo.
Intetho yezimali ezakwenzeka ngomso ikhuphise amehlo
Kuhlatyw’ikhwelo lokuba umphathiswa wezimali umnumzana Tito Mboweni ayiphelise irhafu yeswekile xa esenza intetho yakhe yohlahlo-lwabiwo mali epalamente ngomso. Le rhafu yeziselo ezineswekile ifakwe kunyaka ophelileyo khon’ukuze yehlise ukusetyenziswa kokutya okuneswekile nanjengoko kuneziphumo ezingezihle kwezempilo ezifana nokutyeba ngokugqithisileyo. Umbutho wabelimi nomoba kwilizwe loMzantsi Afrika i-SA Canegrowers Association uthi le rhafu yeswekile ilityabule icandelo lemveliso yalo yaliphuca malunga nebhiliyoni zerandi ukususela ekumiliselweni kwayo. Lo mbutho uthi umphathiswa makayicingisise le meko ze aphonononge igalelo layo kuqoqosho nemisebenzi. Kusenjalo, inkampani yakwaCoca-Cola kweli lizwe ifuna ukudenda abasebenzi abangaphezu kwewaka ngenxa yokuthwaxwa kwemveliso yayo kukumiliselwa kwale rhafu.
simiselwe isigwebo sogqirha wamazinyo owadlwengula umfanyana
Kulindeleke ukuba yazi ngekamva layo ekusitheleni kwale nyanga indoda yaseGeorge efunyenwe inetyala lokuxhaphaza umtwana ngokwezesondo. Izolo inkundla yenkqila eGeorge ive iingxoxo zokugqibela kuvavanyo lwetyala lika-Ian Venter. Umnene lo nongugqirha wamazinyo wadlwengula inkwenkwana eneminyaka elishumi elinesithathu ubudala ngomnyaka ka2015 kambe kunyaka ophambi kwalowo wagwetyelwa ekhayeni lakhe emva kokuxhaphaza ngokwezesondo inkwenkwe eneminyaka elishumi elinesihlanu ubudala. Ophuma kumbutho ongekho phantsi korhulumente ochasene nempatho-gadalala ngakubantwana i-Women and Men Against Children Abuse uJoanne Barret uthi bafuna lo xhaphithanga agityiselwe kwesimnyama isisele nto leyo iyakunika umyalelo ongqongqo nakwabanye.
Badikiwe livumba elibi abahlali baseTafelsig
Abahlali baseTafelsig bathi bakruqukile kukwenyusa iimpumlo berhaxwa livumba lelindle ngenkxa yokungaselwa-so kwemihadi kwanemibhobho yokufunxa amanzi eminxekileyo. Kwimpela-veki esiyifulatheleyo abahlali balo mmandla bakuginye nzima ukutya ngenxa yelindle elibonakalayo liqukuqela kunye namanzi phambi kwamakhaya abo nalapho omnye wabo uGlen Swartz ayichaze le meko ngelithi bebedada kwilindle eliphela emaqatheni. Uthi bakruqukile yile meko kwaye bafuna isisombululo esisigxina kwisixeko seKapa. Uthi kunyaka ophelileyo le ngxaki ilungiswe amatyeli alishumi kodwa nanamhl’oku isaqhuba. Ukanti ngenyanga kaCanzibe kunyaka ophelileyo abahlali baseFreedom Park eTafelsig bebejamelene nale ngxaki nalapho yayizizantyalantyala nobutyadidi bobulongwe bomntu kwizitalato zabo.Kusenjalo ilungu lekomiti kasodolophu kwezamanzi nogutyulo unkosazana Xanthea Linberg uthi oku kubangelwe kukungena kwesanti,imirhaji kwakunye ne-oli yokupheka kwimibhobho yamanzi.